MDRF invitation: “Shut up girl, it’s too sensitive!” – Free Expression Myanmar
Dec 29, 2018 by Coordinator	in News သတငျး
What happens to those who speak out about "sensitive" issues online? What backlash do they face? And from whom? What risks do women face if they talk about sexual and reproduction rights? What happens when you raise LGBT rights?
This is just one session at the Myanmar Digital Rights Forum, 18-19 January in Yangon. The MDRF features more than 12 sessions organised by FEM, MCRB, MIDO, and Phandeeyar.
If you are interested to attend, apply to join us as an MDRF delegate. All delegates can also propose their own sessions too!
As Myanmar continues to experienceadigital leapfrog and connectivity revolution, have the right policies and practices been put in place to protect people’s rights on the internet?
Myanmar Digital Rights Forum will bring together 150 representatives from civil society, the media, the tech industry, and the government to seek collective answers to these important questions.
Are you someone who want to protect people’s rights on the internet?
Join the discussion - beaDelegate! Register here: http://bit.ly/2RNhE9S
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၄ နောက်ပိုင်းကတည်းက ဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်လာပေမယ့် အင်တာနက်ပေါ်က လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ မူဝါဒတွေကို ချမှတ်ပြီးပြီလား? လိုက်နာကျင့်သုံးနေရဲ့လား?
မြန်မာနိုင်ငံဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စာနယ်ဇင်း၊ နည်းပညာသမားတွေနဲ့ အစိုးရကနေပြီး အဲဒီ့အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အတူတူအဖြေရှာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်က အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှိသင့်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ချင်တဲ့သူလား?
ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာ စာရင်းပေးလိုက်ပါ -http://bit.ly/2RNhE9S
မွနျမာနိုငျငံဟာ ၂၀၁၄ နောကျပိုငျးကတညျးက ဆကျသှယျရေး တိုးတကျလာပမေယျ့ အငျတာနကျပျေါက လူ့အခှငျ့အရေးတှကေို ကာကှယျပေးနိုငျဖို့အတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ မူဝါဒတှကေို ခမြှတျပွီးပွီလား? လိုကျနာကငျြ့သုံးနရေဲ့လား?
မွနျမာနိုငျငံဒဈဂဈြတယျအခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးပှဲမှာ အရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးတှေ၊ စာနယျဇငျး၊ နညျးပညာသမားတှနေဲ့ အစိုးရကနပွေီး အဲဒီ့အရေးကွီးတဲ့ မေးခှနျးတှကေို အတူတူအဖွရှောကွမှာ ဖွဈပါတယျ။
သငျက အငျတာနကျပျေါမှာ ရှိသငျ့တဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးကို ကာကှယျခငျြတဲ့သူလား?
ဆှေးနှေးပှဲမှာ ကိုယျစားလှယျအနနေဲ့ ပါဝငျဆှေးနှေးဖို့ ဖိတျချေါလိုကျပါတယျ။ ဒီမှာ စာရငျးပေးလိုကျပါ -http://bit.ly/2RNhE9S
Tagged with: Digital rights, Equality, Gender လိငျ, Human rights defenders, Protection of journalists and human rights defenders